Aguilera, Christina, Christina Aguilera, mitanjaka, mpihira
Christina Maria Aguilera(* 18 December 1980, Staten Island, New York) dia mpihira pop Amerikana.
Nanao sonia fifanarahana amin'ny RCA Records izy taorian'ny nanoratany hira iraytaratraho an'ny sarimihetsikaMulan. Ny albumy voalohanyChristina Aguilera(1999) dia fahombiazana ho an'ny vahoaka sy ireo mpitsikera, ary tao amin'ny 2000 dia nahazo ny loka Grammy ho an'ny Best Newcomer ity album ity. Tsy ela dia namoaka rakikira Latina latinina izyMi Reflejo, izay nahazoany ny 2001 Latin Grammy ho an'ny album tsara indrindra ary koa ny albumy ChristmasNy karazan-tsakafoary samy namidy tsara ireo sary roa ireo.
Navoakan'i 2002 ny rakikirany studio faharoanesoriny ny akanjony, izay tena nahary azy. Samy hafa ny tsikera ary i Christina dia nahazo mari-pankasitrahana Gramey iray ho azy, saingy ny sariny ara-piraisana ara-nofo nandritra ny fampiroboroboana ity rakikira ity dia nanjary lohahevitra tamin'ny fanakianana mahery vaika sy fanesoana. Ny albumy faharoa ao amin'ny studioMiverina amin'ny fotokevitra(2006) misy singa fanahy, jazzua blues. Namidy tsara sy nahazo tsikera tsara izy ary nomena Aguilera tamin'ny fanendrena roa Grammy.
Fanombohan'ny fahazazana sy ny asa
Teraka tao Staten Island, New York, ny rainy i AguileraFausto Wagner Xavier Aguilera, Sergeant avy amin'ny tafika amerikana sy ny reninyShelly Loraine Fidler. Ny rain'i Aguiler dia avy amin'ny teny latinina, teraka tany Guayaquil, Ekoatera, kanadianina ny reniny tamin'ny teny alemà, anglisy, irlandey, ary danois. Ny ray aman-drenin'i Christine dia nihaona rehefa nanompo ny rainyNy Air Force Base Air Harmon(Airbase) any Stephenville, Newfoundland, Kanada.
Ny ray aman-dreniny dia nanambady ny reniny 20 nandritra ny taona maro ary ny rainy 31. Aguilera sy ny ray aman-dreniny niaina tamin'ny taona 6 na 7. Rehefa nisara-panambadiana ny ray aman-dreniny, dia nentin'ny reniny sy Rachel rahavaviny tany amin'ny tranon'ny renibeny tany Rochester, Pennsylvanie, toeram-ponenana any Pittsburgh. Araka ny filazan'i Aguilera sy ny reniny, i Fausto dia zazalahy iray izay nasiaka ara-batana sy ara-pihetseham-po, hita taratra tamin'ny hirany hoe "Izaho no OK" ary "Oh Mother." Nandray fitsaboana ara-pahasalamana i Neny ShellyJim Kearnsary nanova ny anarany ho an'i Shelly Kearns.
Tamin'ny efatra ambin'ny folo, i Christina dia nanoratra ny zanany tokana voalohanyIzay rehetra tiako hatao, doum iray miaraka amin'ny mpihira Japoney Keiz Nakashim.
Ny voalohany mahafantatra ny feon'i Christin dia ny renibeny. Naniry ny ho mpihira i Christina. Amin'ny maha ankizy azy dia nanao lahatahiry samihafa izy ary nandray anjara tamin'ny fifaninanana tanora talenta, izay matetika no nandresy azy. Tsy ela dia nanintona ny fifantohan'ny media izy ary fantatrazazavavy kely manana feo lehibe.
Araka ny fampisehoananandroakaVH1 dia vao mainka nampihorohoro an'ity sticker ity. Rehefa fantatr'ireo mpilatsaka an-tsaha fa handeha hanohitra izany izy ireo, dia niverina avy hatrany izy ireo satria tsy nanam-bintana fotsiny izy ireo. Vetivety dia nialona azy ny mpiara-belona taminy, ary izy no resin'ny fanesoana ary na dia adiny iray monja aza ny gymnastique dia nanandrana nanafika azy. Ary, ohatra, nisy olona nanindrona ny kodiaran'ny fiaran'ny fianakaviany. Nanosika azy hanao izany ny fianakaviana, ary ny didin'i Christinin momba ny talentany dia nangina mba hisorohana ny fanafihana mety iray hafa.
15. Ny March 1990 dia niseho tao anatin'ny fifaninananaStar Searchmiaraka amin'ny hiraKarazana fitiavanaavy amin'i Etty James, saingy tsy nandresy izy. Fotoana fohy taorian'ny nahafatesany tamin'ity fifaninanana ity dia niseho tao amin'ny KDKA-TV izy tamin'ilay fandaharanaMiaraha amin'i Larry Richertary nivoaka niaraka tamin'ilay hira. Ny olona dia nanamarika fa "ny zaza folo taona dia mitovitovy amin'ny 20 taona."
Nandritra ny fahazazany tany Pittsburgh dia nihira ny Banner Star-Spangled izy talohan'ny Pittsburgh Penguins, Pittsburgh Steelers, ary Pittsburgh Pirates (baseball). Ny anjara toerany voalohany dia tonga tamin'ny fandaharana "The New Mickey Mouse Club". Ny mpilalao hafa tao amin'ilay fampisehoana dia Britney Spears, Justin Timberlake, JC Chavez, Rhona Bennett (izay lasa En Vogue tatỳ aoriana), Ryan Gosling sy Keri Russell. Araka ny antontan-taratasynandroakaNy mpiara-miasa dia niantso ny diva.
Iray amin'ireo fampisehoana tsy hay hadinoina indrindra, ohatra, fony izy nihiraTsy manana na inona na inona ahonataon'i Whitney Houston. Rehefa tapitra ny fandaharana 1994, nanomboka nanoratra horonantsary samihafa i Christina, nanantena ny hanao sonia fifanarahana miaraka amin'ny orinasa mpamokatra fandraisam-peo.
1997 dia nisolo an'i Etazonia tamin'ny fety iraisam-pirenena irayGolden Starmiaraka amin'ny hira roa - iray avy amin'i Sheryl Crow ary ny iray dia an'i Diana Ross.
In1998tao amin'ny efitra fidiany nohirainy ho an'i Whitney Houston izy ary nosoratany tamin'ny kasety. Ny E3 dia tsy nahitam-bokatra tamin'ity rakitsoratra ity. Nofidina izy avy eo mba hihira ny hira Reflection ho an'i Disney's 'Mulan'(1998). Tamin'ny famoahana ity hira ity dia nahazo tatitra momba ny rakitra RCA Records izy, tao anatin'ny iray herinandro.Ny Reflection dia nandeha an-tampony 20 tao amin'ny tabilao Billboard ary nomena anarana ho an'ny Golden Globe ny Song Original Song. Natao tamin'ny 24 ny albumy voalohany nataon'i Christina Aguilera. August 1999. Ny sarintany 200 dia tonga tao an-tampon'ny sarimihetsika Billboard 8, ary koa ny charts Canadiana amin'ny fivarotana 14 an-tapitrisa ao Etazonia amin'ny vondrona XNUMX tapitrisa manerana izao tontolo izao.
Ny Singles Genie ao anaty tavoahangy iray, ny ankizivavy tiany sy ny momba ny zaza (izay iriko rehetra) dia voalohany tao amin'ny Billboard Hot 100 nandritra ny 1999 sy 2000 ary izaho dia nitodika tany aminao irery tamin'ny fahatelo. Aguilera dia nahazo ny loka Grammy ho an'ny Newcomer Best and Best Female Singing Performance (ho an'ilay hira Genie In A Bottle). Araka ny voalazan'ireo mpanoratra nandray anjara tamin'ity andian-tsary ity ary niseho tao anatin'ilay rakitranandroakadia naniry ny hampiseho an'i Christina ny lanjany sy ny lanjan'ny feony nandritra ny fampiroboroboana rakitsary izy, noho izany dia nihira ny hira nataony ho an'ny acoustic ary niaraka tamin'ny pianô izy tamin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra. Nahavita ny taona tao amin'ny fampisehoana izyTaom-baovao lehibe lehibetao amin'ny MTV ary toy izany no mpihira voalohany tamin'ity arivo taona ity tao amin'ny MTV.
Taoriana kely tao amin'ny 2000, i Christina voalohany dia nanana ny endriny latinina Amerikana ary nanaraka ny fironan'ny pelaka 12. Ny rakikiran'i Espaina voalohany 2000, Mi Reflejo. Ity rakikira ity dia mirakitra ny dikan-teny Espaniôla amin'ny hira avy amin'ny andiany voalohany.
Nataon'i 27. Sarin'ny 200 sy 1. ao amin'ny tabilao Latino. Misaotra an'io andian-tsary io, nandresy ny Latino Grammy Award tamin'ny 2001 noho ny Best Female Pop Album. Amin'ny ankapobeny, ity rakotoarivony ity dia namakivaky tapitrisa tapitrisa 2,1 manerana izao tontolo izao ary nandrombaka takelaka volamena sy platina telo tao Etazonia. Nahazo ny loka ihany koa izyLoka mozika eran-tanytahaka ilay artista Latinina be mpividy indrindra. Ireo singa Falsas Esperanzas ao amin'ity rakikira ity dia nandeha an-tampony 40 tany Arzantina.
Navoakan'i Christina ihany koa ny CD Christmas 24. October 2000, izay antsoina hoe My Kind of Christmas. Tonga tamin'ny 28 izy io. Raha tokony ho ny billet 200, 1,3 dia nividy tapitrisa tapitrisa ary rakitsoratra platinum tany Etazonia. Nanontany an'i Christina i Ricky Martin mba hanoratra ilay tononkalo Tsy misy olona te hisaraka amin'ny rakikiranySound Loaded. Navoaka tao amin'ny 2001 ilay tokan-tena ho toy ny singa faharoa amin'ity rakikira ity. Any Grande-Bretagne sy Alemaina, lasa any amin'ny TOP 5, Etazonia hatrany TOP 20 sy Suisse, Kanada ary Australie ny TOP 40.
Ao amin'ny 2001 Christina miaraka amin'ny Lil 'Kim, myOU sy P! NK nifidy ny remake Patti LaBelle namely ny taona 1975 Lady Marmalade ho feonkira ny sarimihetsika Moulin Rouge!'. Lady Marmalade nitoetra an-tampon'ny ny sary iray volana sy herinandro, ary any amin'ny firenena hafa ihany koa 11 tonga an-tampon-sary sy ny mpihira rehetra nahazo ny Grammy ho an'ny fiaraha-miasa tsara indrindra Pop peo.
Tamin'ity taona ity, navoaka tany amin'ny fivarotana ilay rakikiraJust Be Free, iray amin'ireo horonan-tsarin'i Christina voarakitra nandritra ny taona maro momba ny 15. Rehefa hita tamin'ny orinasa RCA Records izy, dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny mpankafy azy tsy hividy ity tokan-tena ity izy ary navotsotra tanteraka tany Alemaina.
Volana vitsy taty aoriana, tiany ny orinasam-panoratanaWarlock Recordsmanafaka fotsiny hoe Free Free, rakikira iray izay ahitana fananganana demo hafa. Chrstina nametraka fitoriana ny orinasa noho ny fifanarahana fifanekena sy ny mpamokatra an'ity rakikira ity mba hisorohana ny famotsorana ilay rakikira. Farany, nanaiky ny hamotsorana ity rakikira ity ny roa tonta. Aguilera dia nanome anarana, endrika ary sary ho an'ny fahasimbana tsy voafaritra. Maro amin'ny antsipiriany momba ilay raharaha no nijanona tsiambaratelo. Navoaka tamin'ny 2001 ilay rakikira ary nasehon'i Christina tamin'ny 15 taona.
Na dia nahomby aza ny albumy voalohany an'i Christina, dia tsy faly tamin'ny mozika sy ny sary noforoniny ho azy izy. Tamin'izany fotoana izany dia noraisina ho toy ny bubblegum pop ny hira mozika nataon'i Christinin, fomba malaza tamin'izany fotoana izany. Na izany aza, nampahatsiahy ampahibemaso an'i Christina izy fa tiany kokoa ny rakikiriny manaraka, ny mozika sy ny lyric. Ny fiantraikan'i Steve Kurtz (mpitantana azy) dia lehibe loatra ho azy, mikarakara ny dingana rehetra ankoatry ny fetran'ny fifanarahana.
Tamin'ny volana oktobra 2000 dia nitaky fitoriana am-bavany an'i Kurtz noho ny tsy fitoviana, ny tsy fitoviana sy ny tsy fitoviana eo amin'ny asany matihanina ary koa ny hosoka. Araka ny antontan-taratasim-panjakana, tsy niraharaha ny zony sy ny tombontsoany izy, ary nanao izay mahasoa azy. Ity hetsika ity dia nentina rehefa hitan'i Christina fa naka vola bebe kokoa noho ny nahazoany vola izy, ary vola hafa no novidin'ireo mpanampy hafa hanampy azy. Nanontany ihany koa izyKomisiona momba ny asa ao amin'ny fanjakana Californiafa ny fifanekena dia nofoanana. Taorian'ny nanomezan'i Kurz fijoroana ho vavolombelona, ​​dia nokaramain'i Irving Azoff ho mpitantana vaovao izy. Niova tokoa io fanovana io, indrindra fa tao amin'ny mozika notohiziny.
Kurtz, tamin'io volana io ihany, no namerina ilay raharaha ary nanenjika azy noho ny fanitsakitsahana ny fifanarahana izay efa nitsara azy. Nilaza izy tao amin'ny fitsarana fa manakaiky an'i Christina ny olona manandrana manelingelina ny fifandraisany amin'ny raharaham-barotra ary koa miampanga an'i Azoff.
2002-2003: oranesoriny ny akanjony
Christina nandritra ny fitsidihananesoriny ny akanjony
29. Octobre 2002, rehefa ela ny ela, dia namoaka ny rakipeo faharoa amin'ny teny Anglisy antsoina hoe Stripped.
Tamin'ny herinandro voalohany 330 dia namidiny milanja arivo ary nametrahana faharoa tao amin'ny Billboard 200. Ny ankamaroan'ny CDs dia nampiseho an'i Christina, izay nanao sonia rakikira iray miaraka amin'ny BMG amin'ity albumy ity. Ity raki-kira ity dia manana ny fomba fiasa maro: r'n'b, filazantsara, fanahy, ballad, pop, rock, hip hop ary jazz. Ny ankamaroan'ny mpitsikera dia tsy nitondra ity rakikira ity sy ny lahateniny, ary nanjary tsy niraharaha ny feon'i Christin rehefa nanomboka nanangana sarimihetsika mamoafady. Taorian'ny famoahana ilay rakikira dia nalain'ny mpanao gazety ho toy ny gazety izyMaxim, Vato mikodiadia a CosmoGirl!. Ny ankamaroan 'ireo sary ireo dia mitanjaka na tsy mihetsika. Nolaviny ny faniriany hanintona izany fiovana izany, araka ny filazany, ny sary dia tsara kokoa noho ny toetra taloha. Nanomboka nantsoina hoe fitiavan-tanindrazana izyXtinaary tokony natao ho maizina izany.
Tamin'ny voalohany izy ity sary ny ny asany vokany ratsy, indrindra fa taorian'ny famoahana ny Clip Dirrty. Tamin'ny MTV, nanjary lozobe goavam-be io hira io, raha tsy nilalao tamin'ny sarimihetsika Amerikanina izy. Na izany aza dia lasa korontana eran-tany ny Dirrty ary tonga teo an-tampon'ny lisitra tany amin'ny firenena maromaro. Ny album dia nandeha tao amin'ny TOP 5 tany Angletera, Etazonia ary Kanada. Ny singa faharoa amin'ny fitifirana lehibe tao Beautifulbyl tamin'ny radio. Fighter tokan-tena hafa, tsy mahatana antsika (izay mihira miaraka amin'ny Lil 'Kim) sy ny The Voice tao anatiny nisy nivoaka tao amin'ny roa taona, ka mandritra izany fotoana izany Christina tao amin'ny tabilao. Raki-kira Ao amin'ny tabilao (US sy UK) ihany koa dia mbola nanala mandra-2004 sy ny Etazonia dia inefatra platinina sy ny tanteraka tabilao isan-taona tao amin'ny fitoerana fahafolo (araka ny takelaka).
Ny Miss Independent an'i Kelly Clarkson dia nosoratan'i Christina ary nanomana azy ho an'ny rakikirony tany am-piandohana.
Alba Stripped dia namidy 10 maneran-tany ho anà tapitrisa tapitrisa eran-tany, ary midika fa faharesen-dahatry ny vahoaka malaza any Etazonia, saingy malaza any amin'ny faritra hafa amin'izao tontolo izao.
Tamin'ny volana Jona, dia niaraka tamin'i Justin Timberlake i Christina tamin'ny diany Amerikanina. Nantsoin'izy ireo ity dia ityFialam-boly voamarina(amin'ny anaran'ny andian-tantaran'ny mpanakanto roa). Tamin'ny volana Aogositra, nianjera ny ampahan'ny hazavana tany Atlantic CityBoardwalk Hallary toy izany koa ny ampahany amin'ny fitaovana. Satria efa nitranga talohan'ny nanombohan'ilay fampisehoana, dia tsy maintsy nesorina na naverina ny fampisehoana sy ny fampisehoana maromaro hafa. Tamin'ny faramparan'ny taona dia nandeha nitsidika ivelan'i Etazonia i Christina, saingy efa irery. Amin'izany fomba izany, ny lohatenin'ny tours dia efa voafafa ihanynesoriny ny akanjony. Tamin'ity fitsangatsanganana ity, dia naneho herim-po i Christina, indrindra teo amin'ny ampahany Eoropeana, satria Amerikana dia mpandala ny nentin-drazana amin'io lafiny io. Tena nahomby ilay dia ary ny ankamaroan'ireo fampisehoana dia namidy. Ny mpamaky ny gazetibokyVato mikodiadiaIty fitsangatsanganana ity dia nanamarika ny tsara indrindra tamin'ny taona. I Christina dia nandoko ny volony tamin'ny mainty tamin'izany fotoana izany.
Ho an'ny taona 2004, dia nisy andiana fitsangatsanganana hatao an'i Chingy. Nahemotra anefa ny fitsangantsanganana satria nanana olana tamin'ny tadim-peo i Christina fotoana fohy talohan'ny nanombohana azy. Fa ny gazety japoney BritanikaNy masoandrodia nilaza fa nesorina ny fitsanganana noho ny fahalianana kely sy ny tsy fisian'ny fitaovana vaovao. Nandà izany i Christina. Tamin'ny fampisehoana MTV Video Music, dia nentina niaraka tamin'i Madonna, Britney Spears ary Missy Elliot. Nandritra io fampisehoana io dia nihaino ny hiran'i Madonna tahaka ny A Virgin and Hollywood, ary i Christina dia nanoroka azy niaraka tamin'i Madonna, izay niteraka herisetra lehibe.
Nandritra ny 2003, Christina koa dia nanjary endrika ny marika Versace.
2004-2005: fifindrana teo amin'i Stripped sy Back To Basics
Tamin'ny Janoary dia namoaka gazetiboky britanika ho an'ny lehilahy 2004Zoofa i Christina dia mety ho bisexual. Tao amin'ny tafatafa iray dia nilaza izy hoe: "Hitako fa mahafinaritra kokoa ny mijery vehivavy mihoatra noho ny lehilahy. Ampio aho fa te hanandrana ny fananako. Raha midika hoe zazavavy, avelao izy ireo handeha. " Nilaza ihany koa izy fa tiany ny firaisana ara-nofo. "Tsy manana firaisana aho ary tsy tia firaisana. Nefa tsy midika izany fa tsy afaka hiaraka amiko ny tongotro. "
Nanapa-kevitra àry i Christina hampiasa sarin-javatra matotra kokoa, izay nidera azy bebe kokoa.
Nosoratany ny hira Hello ho an'ny dokambarotra Mercedes-Benz. Fotoana fohy taorian'izay dia nanomboka niasa tamin'ny volom-borona vaovao izy ary nanamboatra ny volony marevaka, nanesorana sy namoaka sary an'i Marilyn Monroe. Mpankafy maro no milaza fa miaraka miaraka amin'ny kintan'i Hollywood hafa (toa an'i Dita Von Teese, Gwen Stefani sy Ashley Judd) izy ireo no mitondra ny glamouran'i Hollywood hatramin'ny roampolo taona, telopolo sy efa-polo taona.
Talohan'ny fifidianana ho filoham-pirenena Amerikana ho avy ao 2004, dia nanatevin-daharana fampielezan-kevitry ny tsy mitady tombontsoa i ChristinaAmbarao ny tenanaoary niseho tao amin'ny takelaka misy teny filamatraIanao ihany no afaka mangina (ianao irery ihany no afaka mangina). Ity fampielezan-kevitra ity dia natao hisarihana (tsy ny) tanora mpifidy ihany. Ao amin'ireo takelaka ireo, i Christina dia voasariky ny vava mihidy sy voatosika, izay natao hanehoana ny tsy fisian'ny hevitra raha tsy mifidy ianao. Niseho tao amin'ny fampisehoana Oprah Winfrey izy mba hiresaka momba ny maha-zava-dehibe ny mifidy.
Tamin'ny faran'ny fahavaratra dia namela singa roa i 2004. Ny Car Wash no voalohany, fanamarihana ny hiran'i Rose Royce. Missy Elliott dia nasongadina tamin'ity hira ity, ary io singan-tokana io dia voarakitra an-tsehatra ho an'ny tantara an-tsehatr'i The Shark Story. Ny hira faharoa dia koa duet, amin'ity indray mitoraka ity amin'ny rapper Nelly ary antsoina hoe Tilt Ya Head Back. Samy nianjera ara-barotra avokoa ny singulier rehetra any Etazonia, saingy efa tsara lavitra noho ny tontolo hafa.
Taorian'ny fotoana dia nivoaka ny DVD voalohany an'i ChristinaVoaroaka any Angletera, rakitsoratra avy amin'ny fampisehoana nataony tany Grande Bretagne. Tamin'ny volana Desambra izy dia nanamboatra ranomanitraXpose, saingy novidiana tany amin'ny firenena eoropeanina sasany.
Niara-niasa tamin'ny mpanakanto jazz, Herbie Hancock, i Christina tao amin'ny hiran'i Leon RuselHira ho anao, izay nosoratany tao amin'ny rakikiran'i Hancockfahafaha. Ho an'ity hira ity, nahazo vatsim-pianarana Grammy ry zareo ho an'ny hira tsara indrindra.
Niverina tany amin'ny fiorenany tany Disney i Christina. Nanomboka nanomboka nankalaza ny faha 50 taonan'ny Disneyland izyRaha maniry kintana iray ianao. Niara-niasa tamin'i Andrea Bocelli koa izy tamin'ilay hiraSomos Noviosho an'ny rakikiranyamore, izay navotsotra tany am-piandohan'ny 2006. Natao tamin'ny baolina fanasoavana izyHampiray ny kintana(hetsika manohitra ny mosary) any Johannesburg, Afrika Atsimo amin'ny faran'ny 2005 miaraka amin'ny kintana tahaka an'i Diana Ross sy Westlife, ary koa amin'ny volana NovambraFonds ChildrenNelsona Madely.
2006-2008: Ny vanim-potoan'ny Back To Basics sy ny rakikiran'ny hitsikera lehibe indrindra
Miverina any amin'ny Fitaovana Fitsikilovana
Tamin'ny volana Martsa, 2006 dia nanao sonia fifanarahana tamin'ny Orange Mobile hanehoana sy hampiroboroboana finday vaovao amin'ny finday Sony Ericsson Walkman manerana an'i Eoropa. Niaraka tamin'ny mpihira Libane Elipsa sy ny mpihira Koreana Rain, dia niseho tamin'ny dokambarotr'i Pepsi izy. Nalefa tamin'ny 2006 ny Spot nandritra ny Champions World Football.
Nomen'i Christina nitanjaka ihany koa ny gazetiboky GQ tamin'ny Mey. Marlene Dietrich dia nahazo tsindrimandry tamin'ity sary ity. Ao amin'ity laharana ity, dia aiza ihany koa ny resaka dia naneho ny fahadisoam-panantenany amin'ny mpiara-miasa aminy Mariah Carey: "Tsy hentitra loatra koa anefa nitondrany ahy ... ary mandra-dia amin'ny antoko ary mihevitra aho fa tsara tarehy misy mamo ary nilaza tamiko tena nalam-baraka. "Mariah voalaza ao amin'ny gazety:" mampalahelo fa mampiasa ny anarako, ary dia misarika izany tamin'ny lasa mba ho hita kokoa ny tenany. "
Aguilera Dia hoy izy: "Nieritreritra Tsy te hampahatezitra Mariah akory va fanambarana izay no nanalana azy teny manodidina. Tena hanaja azy. "Christina ny mpiambina, izay niasa nandritra ny valo taona amin'ny Madonna sy ny enin-taona amin'ny Jennifer Lopez, dia hoy izy:" Ny hafa manana ny fampisehoana bebe kokoa momba ny fandaharana sy ny fampisehoana, fa io tovovavy (Christina tiany hambara, mazava ho azy) dia afaka mihira. "
Natao tamin'ny 15 ny rakitsary fahatelo nataon'i Christinino ao amin'ny album Back to Basics. Aogositra sy tany amin'ny firenena telo ambin'ny folo no tonga voalohany. Ny mpihira ilay mpihira dia tsy nahitana olona hafa nahomby, tany Etazonia dia nahazo fahenina ary tany UK tamin'ny TOP 3. Ny gazetiboky Rolling Stone dia mametraka izany amin'ny 18. Ampiasao ao amin'ny lisitry ny hira tsara indrindra an'ny 2006. Nofaritan'i Christina tamin'ity alim-bolana ity ho toy ny fiverenana ho amin'ny roapolo, telopolo sy efa-polo taona, izay midika hoe jazz, blues, fanahy, saingy amin'ny fomba maoderina.
Anisan'ireo mpamokatra an'io rakikira io ny DJ Premier, Kwamé, Linda Perry ary Mark Ronson. Ny hira iray, "FUSS," dia nosoratana ho setrin'ny fihenjanana misy eo amin'i Christina sy Scott Storch nandritra ny fampisehoana ny rakikiran'i Stripped. Ny singa faharoa amin'ny rakikiraMiverina amin'ny fotonyis a songHurt. Izy no nametraka ny laharana fahaefatra tamin'ny mondialy, voalohany tao amin'ny tabilao Eurochart Singles Sales ao amin'ny Billboard, ary amin'ny toerana faha-19 ao amin'ny Chartboard Chart.
Ankoatra ny fampiroboroboana ny rakikirany, i Christina sy P. Diddy dia niara-niasa tamin'ny tononkira Tell Me, izay azo jerena ao amin'ny rakikiran'ny Press Play. Navoaka tamin'ny fararano 2006 ilay tokan-tena. Nanorim-ponenana tao amin'ny laharana faha-Britanika izy, ary nandeha tamin'ny toerana ambony nandritra ny herinandro nanaraka.
2006 dia nanambara tamin'ny volana SeptambraBaby Jane(araka ny nolazain'i Christina indraindray) ny fitsidihany "Back To Basics", miaraka amin'ny concert 18 ao Eoropa, miaraka amin'ny 17 aloha milalao. Novambra sy ny 17 farany. Desambra any Prague. Mifanohitra amin'ny drafitra tany am-piandohana, izy ireo dia afaka mandamina fitsangatsanganana amin'ireo klioba kely ao 20. Febroary tao Houston ary noforonin'ny 5. May any Floride.
Saingy nanizingizina izy fa mbola handamina ny fitsidihan'ireo klioba izy.
Tao anatin'ny dimy volana, nivarotra tapakila an-tapitrisany ny album Back to Basics 3,3, izay ny 1,3 tapitrisa any Etazonia.
Ny singa fahatelo amin'ity rakikira ity dia Candyman. Navoakan'i 25. Janoary ary navoaka tamin'ny fahitalavitra tamin'ny Febroary 2007.
Tamin'ny fiafaran'ny volana septambra, 2008 dia nahatratra ireo onjam-peo Czech radioMitazatazana kokoa ny 'Gettin', izay nialoha ny raketin'ilay anarana iray izay navoakan'ny 7. Novambra 2008. Ity no fifantenana ny hira tsara indrindra amin'ny 1999 ka 2008. Hahita singiolary tahaka anao ianaoGenie ao amin'ny tavoahangy, Inona no tadiavin'ny tovovavy, mitodika aminao ahonaFighter, Beautifulna aorianaTsy olon-kafa, Candyman. Ny vaovao dia atolotry ny mpitovoGenie 2.0, Mitazona Tsara Kokoa ',' Dynamite '.
2010 - Anio: Bionic album, Varieté sarimihetsika sy mpitsara ao amin'ny The Voice contest
Natao tamin'ny 8 ny rakitsary tantara fahitalavitra Bionic. Jona 2010. Aguilera dia niara-niasa tamin'i Linda Perry, mpihira anglisy MIA na Amerikana mpiangaly rap Nicki Minaj. raki-kiraBionic, izay nandraisan'ny mpihira niala ny pop to electronics sy mozika dihy, nahazo fandraisana an-tserasera avy amin'ny vahoaka. Ny fivarotana Album dia nijanona tsy niova, nipoitra voalohany tamin'ny fahatelo tao amin'ny US 110,000 15. Fotoana fohy taorian'ny famotsorana azy dia nihoatra ny fampiroboroboana ilay rakikira ny mpihira ary nanafoana ny fitsidiham-bahaolana ho avy. Nohazavainy ny tsy fahampian'ny fotoana fanomanana ho antony. Album Bionic no mpihira voalohany ao amin'ny asany, izay tsy nahazoany nomination Grammy. Hoy ilay mpihira tatỳ aoriana tao anatin'ny iray tamin'ireo fanadihadiana, "Tena nirehareha tokoa aho tamin'ny rakikira. Nahomby izahay tamin'ny fampiroboroboana, saingy nisy fiantraikany tamin'ny lafiny maro. Tsy misy na inona na inona manakana ahy, fa ny faniriana hanao asa bebe kokoa. "2010. Nahazo ny kintan'i Kristy tao amin'ny Hollywood Walk of Fame ny November XNUMX.
Tamin'ny volana novambra, 2010 dia naneho ny sarimihetsika Varieté, izay i Christina Aguilera dia maneho ny andraikitra voalohany amin'ny zazavavy virjiny Ali Rose, izay mahita fitiavana sy fahombiazana ao amin'ny Los Angeles Fox Club.Nisy horonan-tsarimihetsika iray koa notifirina tamin'ilay sarimihetsika ary nihira valo ambinifolo izy.Teo amin'ny Aguilera, Cher sy Stanley Tucci, Eric Dane, Kristen Bell ary Cam Gigandet dia niseho tao anatin'ilay sarimihetsika.
Niaraka tamin'ny feon-kira, i Christina Aguilera sy ny fandaharana dia nanao izanyCastle Wallsmiaraka amin'ny rapper amerikana TI noho ny rakitsoranytsy misy famindram-po. 6. Ny febroary 2011 dia nihira ny hiram-piainana tamin'ny Super Bowl farany. Saingy nanana tsikera be dia be momba ny zava-bitany izy satria nanadino ny tonon'ny hira. Niala tsiny tamin'ny tranga tamin'ny fahitalavitra CNN ilay tranga.
Tamin'ny Aprily, 2011 dia niaraka tamin'i Adam Levine, Cee Lo Greene, ary Blake Shelton, mpitsara tao The Voice. Ny fifaninanana nandefa tao NBC dia tonga tampoka tampoka ary iray amin'ireo hijery be mpijery indrindra.Aguilera dia nandrakitra ilay hira Moves Like Jagger niaraka tamin'ny band Maroon 5 nandritra ny fotoana nahitany azy ho iray tamin'ireo mpitsara jadona Adam Levine. Ny hira dia nihanika ny ambony US Billboard Hot 100.
Tamin'ny volana May, 2011 Aguilera dia nanambara fa horonan-tsarimihetsika vaovao afaka alefa amin'ny faran'ny lohataona sy fahavaratra amin'ny 2012.
9. November 2012 Navoakan'i Christina ny rakitsary Studio 5, mitondra ny anarana hoe "Lotus". Christina amin'ity tantara ity dia mamaritra ny zavatra niainany sy ny fihetseham-pony nandritra ny roa taona lasa. Lotus dia (araka ny teniny ihany) ho fanorenana indray! Avy ao anatin'ilay rakikira dia tonga tamina pilotanao tena nahomby, izay no voalohany i Kristianin'i Christinin nahazo ny mari-pankasitrahana VEVO. Ireo famantarana hafa roa, "Let There Be Love" ary ny "Just A Fool", dia tsy nahomby. Tsy fantatra izay nandefasana ny fampiroboroboana rakitsary hafa, ka tsy nahomby ny fahombiazany ...